Madaxweynaha kooxda Atlético Madrid Enrique Cerezo oo u jawaab celiyay Sergio Ramos – Gool FM
Berbatov oo ka hadlay booska ay ku dhameysan karto Man United xilli ciyaareedkan, kaddib soo laabashada Pogba
Kooxda Arsenal oo go’aamisay mustaqbalka Pierre-Emerick Aubameyang
Federico Valverde oo heshiis la galay shirkad cusub
Kooxda Manchester City oo ka jawaabtay xiisaha ay Manchester United u muujinayso Raheem Sterling
Erling Haaland oo weli shaki weyn laga gelinayo kulanka soo aaddan ee Kooxdiisa Borussia Dortmund
Arsenal oo sheegtay Kooxda ay ka iibineyso Aubameyang & Qorshahooda xiga haddii ay kula heshiin waayaan iibkiisa
Muxuu ka yiri Macallinka xulka Argentina ee Lionel Scaloni haddii uu Lautaro Kooxda Barcelona kula biiro Leo Messi?
Real Madrid oo markaan ku soo biirtay bartilmaameedka Kooxaha Man United iyo Chelsea ee Jadon Sancho
Chelsea oo rajeyneysa inay dhameystirto AFAR heshiis ee xoogan suuqa xagaaga ee soo socda
Muxuu ka yiri Jordi Alba wararka shegaya in Neymar Jr uu dib ugu soo laabanayo Barcelona?
Madaxweynaha kooxda Atlético Madrid Enrique Cerezo oo u jawaab celiyay Sergio Ramos
Dajiye May 28, 2018
(Atletico Madrid) 28 Maajo 2018. Madaxweynaha kooxda Atletico Madrid Enrique Cerezo ayaa wuxuu ka hadlay xaalada ka dhex jirta kooxda Real Madrid, iyo suurtagalnimada uu Cristiano Ronald kaga dhaqaaqi karo Santiago Bernabeu.
Sidoo kale madaxweynaha kooxda Atletico Madrid Enrique Cerezo ayaa wuxuu ka hadlay arinta ku aadan Antoine Griezmann.
“Ma garanayo dhibaatooyinka kooxaha kale, waxa aan dhahayo waa waxa aan horay u sheegay, Griezmann wuxuu kooxda kula jiraa heshiis afar sano gaarsiisan”.
Enrique Cerezo ayaa sidoo kale ka hadaly hadal uu Sergio Ramos ku weeraray kooxda Atletico Madrid, wuxuuna yidhi: “15-ka Agoosto, ayaan soo laaban doonnaa waxaan arki doonnaa cida ku weyn caasimada Madrid”.
“Haatan waxaynu ku jirnaa maalmo fasax ah, ka dibna waxaan u shaqeyn doonaa inaan badino”.
Dhawaan ayay ahayd kadib markii uu Sergio Ramos sheegay inta lagu gudi jiray dabaal daga koobkii Champions League ay ku guuleysteen: “Waxaan qaadeynaa hees sababtoo ah dadka qaarkood waxay iloobaan mararka qaarkood, u sheega haatan hogaamiyaasha caasimada”.
Paulo Dybala: “Waxaan dhamaanteen garab istaagi doonaa Lionel Messi si uu ugu guuleysto koobka aduunka”
Javier Zanetti oo SHAN xul u saadaaliyay in midkood uu ku guuleysan doono koobka aduunka ee 2018